Nin doonayay inuu isku qarxiyo xarun tareenada laga raaco oo toogasho lagu dilay (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Nin doonayay inuu isku qarxiyo xarun tareenada laga raaco oo toogasho lagu dilay (SAWIRO)
Nin doonayay inuu isku qarxiyo xarunta tareenada laga raaco ee magaalada Brussels ee caasimadda dalka Biljamka ayaa toogasho lagu dilay, kadib markii ciidamada illaalida ka haysay xaruntaasi ay rasaas ku fureen ninkaas.
Kahor inta aan ninkaasi toogashada lagu dilin ayaa waxaa dhacay qarax yar oo la sheegay inuu ninkaasi geystay, inkastoo qaraxaasi uusan wax qasaare ah geysan.
Ciidamada illaalada ka haayay xaruntaasi tareenada laga raaco ayaa toogasho ku dilay ninkaasi la sheegay inuu xirnaa suunka walxaha qarxa ka sameeysan, islamarkaana dhabarkiisa dambe ku watay boorso walxaha qarxa laga soo buuxiyay.
Illaa iyo haatan ma jiro faah-faahin intaasi dheer oo laga helaayo ninkaasi la toogtay waxa uu ahaa iyo dalka uu kasoo jeeday.
Dhinaca kale, xeer illaaliyaha dowladda Biljam ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid argagaxiso oo lagu doonayay in lagu waxyeeleeyo dad shacab ah.
Tan iyo markii ay dalka Biljam ka dhaceen weerarada argagaxiso muddo sanad iyo bar kahor, waxaa ciidamada amniga iyo kuwa militeriga dalkaasi la geliyay heegan aad u sareeya, waxaana goobaha ay dadka isugu yimaadaan iyo xarumaha dowlada lasoo dhoobay ciidamo aad u badan.